Akụkọ - Ọdịiche dị n'etiti valvụ bọọlụ rọba na valvụ urukurubụba rọba maka injinịa ụlọ oriri na ọṅụṅụ…
Ọdịiche dị n'etiti valvụ bọọlụ rọba na valvụ urukurubụba rọba maka injinia ụlọ oriri na ọṅụṅụ…
Plastic bọọlụ valvụ bụ nke PVC plastic bọọlụ valvụ. Plastic bọọlụ na valvụ bọọlụ pvc kwesịrị ekwesị maka nkwụsị nke mgbasa ozi na-emebi emebi na usoro njem. Ibu dị arọ na nguzogide corrosion siri ike. A na-eji valvụ bọọlụ pneumatic rọba na pvc pneumatic ball valves n'ọtụtụ mpaghara, dị ka mmiri dị ọcha n'ozuzu na sistemụ ọkpọkọ mmiri ọ drinkingụ ,ụ, sistemu mmiri mmiri na mmiri nsị, mmiri nnu na sistem mmiri mmiri, sistemu acid-base na sistem kemịkalụ, wdg. , Ọtụtụ ndị ọrụ ghọtara àgwà ahụ.
(1) Ọdịdị ahụ dị kọmpat ma maa mma.
(2) Ahụ́ adịghị arọ ma dị mfe itinye ya.
(3) Ihe ahụ bụ ịdị ọcha na adịghị egbu egbu.
(4) Mgbochi corrosion siri ike na oke ngwa ngwa.
(5) Uwe na-eguzogide, dị mfe ịkwasa, dị mfe ilekọta.
PVC plastic nru ububa valvụ nwere uru nke siri ike corrosion eguzogide, eyi iguzogide, ìhè arọ nke valvụ ahụ, na ọtụtụ ngwa ngwa. Ọdịdị ahụ valvụ ahụ na-anabata ụdị etiti etiti, nke dị mfe ịkwasa ma dị mfe idowe. Ọ dabara maka mmiri, ikuku, mmanụ, na kemịkalụ na-emebi emebi. mmiri mmiri. Pneumatic plastic nru ububa valve nwere ike gbanwee olu ngbanwe ozugbo site na ikuku abịakọrọ. Ejiri ya na ihe nkwụnye valvụ iji tinye akara ngosi 4-20mA, nke nwere ike ịhazigharị mgbasa ozi, nrụgide, okpomọkụ na ihe ndị ọzọ. A na-eji ya n'ozuzu mmiri dị ọcha na pipeline mmiri ọṅụṅụ. Ogo nke sistemu, sistemu mmiri na-ekpofu mmiri na sistemu nsị, sistemu brine na mmiri mmiri, sistemu acid-base na sistemu kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ achọpụtala ọtụtụ ndị ọrụ.
Atụmatụ nke pneumatic plastic nru ububa valve:
1. Ihe eji eme ihe dị ọcha na nke na-adịghị egbu egbu, nhazi dị mfe, obere nha, ịdị arọ dị arọ, ihe oriri dị ala, na obere ntinye ntinye;
2. A na-ejikọta njikọ ahụ site na ịpịa flanges na njedebe abụọ, nke dị mma maka ịkwasa na nhazi, na-eyi na-eguzogide, dị mfe ịkwasa, dị mfe ma dị mfe ịnọgide na-enwe;
3. valvụ nru ububa nke PVC na-agbanye ngwa ngwa, na-emegharị na ogo 90, ma nwee obere ụda ụgbọ ala.
4.The pneumatic plastic nru ububa valve nwere ihe dị iche iche a ga-ahọrọ dị ka mgbasa ozi dị iche iche, na-eguzogide corrosion siri ike, obere nha, kwesịrị ekwesị maka ụdị pipeline dị iche iche, na ọtụtụ ngwa ngwa.